Vamwe muZanu PF Vochemachema Nekunonoka Kuitwa kweSarudzo dzePrimary
WASHINGTON DC — Politiburo yeZanu PF neChina yakaita musangano pamuzinda wayo muHarare wekuzeya nezvamamiriroakaita zvinhu mubato iri kusanganisawo nyaya yesarudzo dzemaprimary elections.
Asi mutauriri webato iri VaRugare Gumbo vaudza Studio 7 kuti Politiburo haina kuzopedza kuzeya nyaya yesarudzo dzemaprimary uye ichazoita musangano wakakosha wekuzeya nyaya iyi zvizere. VaGumbo havana havi kutaura kuti hurukuro ichaitwa rinhi.
Musangano wePolitiburo uyu unouya panguva apo mubato umu muri kunzi mune kugunun’una kukuru kubva kune dzimwe nhengo, zvikuru dzepasi dziri kutarisirawo kukwikwidza musarudzo, asi dzisati dzaziva kuti sarudzo idzi dzichaitwa riini sezvo bato iri riri kuti sarudzo dzemunyika dzichaitwa musi wa29 Chikumi gore rino.
Asi vamwe vari kuti izvi zvinenge zvoreva kuti vachakwikwidza musarudzo dzemaprimary idzi vanenge vasisina nguva yakakwana yekutsvaga rutsigiro kana kuzvishambadza kunhengo dzavo.
Mazuva apera bato iri rakarambidza nhengo dzaro dzichada kukwikwidza kutsvaga rutsigiro, richiti izvi zvinozokanganisa budiriro dzematunhu ane nhengo dzaro sezvo vamiriri vematunhu aya vachizosiya basa ravo votandanisana nevari kuda kuvakwikwidza ava.
Pane mashokowo ekuti vamwe vevanhu vari kuda kukwikwidza ava vachiri kushanda muchiuto, chipurisa kana mamwe mapazi ehurumende.
Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti vamwe havasi kufarawo nemitemo inonzi iri kutarisirwa kudzikwa yekuti munhu anobvumidzwa kukwikwidza anenge akamira sei, inosanganisira fundo inofanirwa kuve nemunhu, makore aagara nezvimwe zvakadaro.
Harisi bato reZanu PF chete ranonoka kuita sarudzo dzemaprimary, sezvo bato reMDC inotungamirirwa naVaTsvangirai rakatozozivisa svondo rapera kuti rakatambira mazita enhengo dzichakwikwidza mumaprimary ebato.
Asi veruzhinji vebato iri vanonzi vari kuti havasati vaziva kuti sarudzo dzacho dzichaitwa riini, kunyange hazvo bato iri riri kunzi rakati dzingangotanga musi wa20 mwedzi uno.
Vamwe vanoongoorora zvematongerwo enyika vanoti mapato maviri aya ari kuda kudzivirira vadare vari pazvigaro.
Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZanu PF, uye vari mumiriri weMberengwa East muparamende, VaJoram Gumbo vatenda kuti nguva inogona kunge yave shoma kune vachada kukwikwidza, asi vati chinotariswa pakuitwa kwesarudzo dze primary izuva rinenge ratarwa rekuita sarudzo dzemunyika, iro risati ratarwa kusvika pari nhasi.
Policy and Research director muMDC T, VaCharles Mangongera vati bato ravo harione sekunge nguva yekuita sarudzo dzeprimary yapera, sezvo mapato ari muhurumende asati awirirana pazuva rekuita sarudzo, sezviri muchibvumirano chekuumba hurumende.
Hurukuro naVaJoram Gumbo pamwe naVaCharles Mangongera